အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ ကျန်းမာရေး - မိသားစု
မျောက်ကျောက်ရောဂါက ကမ္ဘာကို ခြိမ်းခြောက်တော့မှာလား
မေ ၂၁, ၂၀၂၂ - ၁၁:၄၃ ညနေ
‘မျောက်ကျောက်ရောဂါ’ ကူးစက်မှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိုင်ငံမှာ တွေ့လာရပြီး ဒီပြဿနာဖြေရှင်းရေး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က အရေးပေါ်အစည်းအ၀ေး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
လွယ်လည်းလွယ် အကုန်အကျလည်းမရှိတဲ့နည်းနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်
မတျ ၁၁, ၂၀၂၂ - ၁၁:၄၉ ညနေ
နှလုံးရောဂါဟာ တစ်နှစ်ကို ၁၈ သန်းလောက် အသက်ဆုံးရှုံးအောင် အန္တရာယ်ပေးနေတဲ့ ရောဂါဆိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူအသေအပျောက်အများဆုံး ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါမဖြစ်အောင် ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ အလွန်ပဲအရေးကြီးလှပါတယ်။
Delta ထက် ပိုကူးစက်မြန်သည့် Omicron အတွက် WHO သတိပေး
ဒီဇငျဘာ ၂၁, ၂၀၂၁ - ၁၁:၂၆ ညနေ
ပုံပြောင်းကိုဗစ် Omicron (အိုမီခရွန်) ဟာ အရင်က Delta ထက် ပိုမိုကူးစက်မြန်ပြီး ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသူတွေ၊ အရင်ကိုဗစ်ကူးထားသူတွေမှာပါ ပိုမိုကူးစက်ကြောင်း တွေ့ရတဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က တနင်္လာနေ့မှာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံပြောင်း ကိုဗစ်သစ် Omicron က Delta ကဲ့သို့ အန္တရာယ်ရှိနေ
ဒီဇငျဘာ ၁၈, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၆ ညနေ
အခုလက်ရှိ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ပုံပြောင်းကိုဗစ် Omicron ဟာ သူအရင်က ​ပြန့်ခဲ့တဲ့ Delta လောက် မပြင်းဘူးဆိုတဲ့ အထောက်အထားမျိုး မတွေ့ရဘဲ၊ ပြန်လည်ကူးစက်နိုင်မှုကလည်း ၅ ဆ ပိုမြင့်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ကပ်ရောဂါ အသစ်အတွက် ပြင်ဆင် ထားရန် AstraZeneca ကာကွယ် ဆေးဖန်တီး သူ သတိပေး
ဒီဇငျဘာ ၆, ၂၀၂၁ - ၁၁:၃၉ ညနေ
ကမ္ဘာလူသားတွေဟာ နောက်ထပ်အသေအပျောက်များတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ ထပ်မံကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး လက်ရှိ ရရှိထားတဲ့ အသိပညာတွေကို အချည်အနှီးမလုပ်ကြဖို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး AstraZeneca ကို ဖန်တီးသူ ပညာရှင်က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံပြောင်း ကိုဗစ် အိုမီခရွန် အတွက် အစိုးရိမ် မလွန်ကြရန် Pfizer ကာကွယ်ဆေး ဖန်တီးရှင် ပြော
ဒီဇငျဘာ ၁, ၂၀၂၁ - ၁၁:၃၆ ညနေ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လက်ရှိ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကိုဗစ်မျိုးကွဲ Omicron နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရိမ်မလွန်ကြဖို့ Pfizer ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့သူ BioNTech ကုမ္ပဏီ စီအီးအို ယူဂါ ဆာဟင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများက Omicron ကို ကာကွယ် နိုင်စွမ်း သိပ်မရှိဟု Moderna အကြီးအကဲ ယူဆ
နိုဝငျဘာ ၃၀, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၇ ညနေ
ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron ကို ထိန်းချုပ်ဖို့မှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေက ထိရောက်မှု သိပ်ရှိမယ့်ပုံမပေါ်ဘဲ ကာကွယ်ဆေးသစ်ထွက်ဖို့အတွက် လနဲ့ချီ အချိန်ယူရဖွယ်ရှိတယ်လို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကုမ္ပဏီ Moderna ရဲ့ စီအီးအို စတီဖိန်း ဘန်ဆဲလ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၉ နိုင်ငံတွင် တွေ့လာ
နိုဝငျဘာ ၂၈, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၈ ညနေ
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron ကူးစက်သူ ၂ ဦး တွေ့ရှိတယ်လို့ ဩစတေးလျနိုင်ငံက ဒီကနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မျိုးကွဲသစ်ပြန့်နှံ့တဲ့နိုင်ငံ စုစုပေါင်း ၉ ခုအထိ ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နှလုံး ကျန်းမာရေး အတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်ရာဝင်ချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်လဲ
နိုဝငျဘာ ၂၄, ၂၀၂၁ - ၁၁:၂၃ ညနေ
နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအိပ်ရာဝင်ချိန်ဟာ ည ၁၀ နာရီနဲ့ ၁၁နာရီအတွင်း ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အသစ်တွေကို အခြေခံပြီး ဉရောပ နှလုံးရောဂါဂျာနယ်က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်လွှား ဆေးလိပ်သောက်သူဦးရေ ကျဆင်းဟု WHO ပြော
နိုဝငျဘာ ၁၇, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၇ ညနေ
ကမ္ဘာတစ်လွှား ဆေးလိပ်သောက်သူနှုန်းထားဟာ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ တည်ငြိမ်စွာ ကျဆင်းလာကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က အင်္ဂါနေ့မှာ ပြောပြီး နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အသက်ဘေးများတဲ့ ဆေးရွက်ကြီး စွဲတာကို တိုက်ထုတ်ရန် ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။
(( ကျနော် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အား ချစ်မြတ်နိုးပါသည်)) ဆိုသည့် စီမံကိန်း စတင်၊ ဂျန်မ်ကရာန် ဗလီ ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၂, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ဖတ်တတ်ရန် သင်ကြားရေး အစီအစဉ် ဖြစ်သည့် (( ကျနော် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အား ချစ်မြတ်နိုးပါသည်)) ဆိုသည့် စီမံကိန်း အား စတင် သည့် အစည်းအဝေး ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျန်မ်ကရာန် ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် ၏ အစည်းအဝေး ခန်းမ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဤဝတ်ကျောင်းတော်၏ ဂေါပက လူကြီး H.I ဟမီဒီရမ်းန် မှ ကြီးမှူးခဲ့ ပါတယ်။
ဓာတ် မတည့် ခြင်း
ဇှနျ ၁၄, ၂၀၂၁ - ၁၀:၄၅ နံနကျ
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဓာတ်မတည့်ခြင်း မတူညီနိုင်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ လူဦးရေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ခံစားရတယ်။
ကင်ဆာ ပြန် မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ဆင်ခြင် နေထိုင်သင့် သလဲ ?
ဇှနျ ၁၂, ၂၀၂၁ - ၁၀:၁၁ ညနေ
ကင်ဆာဖြစ်တယ်၊ ကုထုံးတွေ ခံယူတယ်၊ တော်တော်လေး ရောဂါကို ထိန်းနိုင်ပြီ၊ ပျောက်သလောက် ရှိနေပြီဆိုရင် ကုထုံးတွေကို ရပ်ပြီး ရက်ချိန်းတွေ ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါတယ်။ ကုပြီးပြီပဲ။ ဘာလို့ ရက်ချိန်းတွေ ပြန်ပြန်ခေါ်တာလဲလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ကင်ဆာ ဖြစ်ဖူးတဲ့သူက သူများထက် ကင်ဆာပြန်ဖြစ် နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ ၂ သန်းအထိရှိလာနိုင်ဟု WHO သတိပေး
စကျတငျဘာ ၂၇, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၉ ညနေ
ကာကွယ်ဆေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်​ပြန့် အသုံးမပြုနိုင်ခင်မှာ Covid-19 ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ ၂ သန်းအထိ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အရေးပေါ်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲ မိုက်ရိုင်ယန်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
လေထဲမှတစ်ဆင့် ကိုဗစ်ကူးနိုင်သည့်အချက်ကို လက်ခံရန် WHO ကို ပညာရှင်များ တိုက်တွန်း
ဇူလိုငျ ၇, ၂၀၂၀ - ၁၁:၃၁ ညနေ
Covid-19 ရောဂါဟာ ​လေထဲကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံကြေငြာပေးဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကို အမေရိကန်နဲ့ ဩစတေးလျ သိပ္ပံပညာရှင် ၂၀၀ ကျော်က တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဖဖေျောဝါရီ ၂၃, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၀ ညနေ
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့က စလိုက်တဲ့ ကိုဗစ်ဒ်နိုင်တင်းန် (COVID-19) နောက်ဆက်တွဲ ရိုက်ခတ်လာမယ့် ပြဿနာတွေ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ပြင်ဆင်ထားဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ကိုဗစ်ဒ်နိုင် တင်းန်ဗိုင်းစ်ရပ်ကြောင့် တရုတ်အပါဝင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာပါ သိသိသာသာ ရိုက်ခတ်စေပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံနေရတဲ့ ကုန် သွယ်ရေးနဲ့ လူမှုရေးတွေမှာသက် ရောက်မှုတွေ စတင်နေပြီဖြစ်ပါ တယ်။
ဖဖေျောဝါရီ ၉, ၂၀၂၀ - ၁၁:၁၈ ညနေ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ ကူညီ ဖို့ ရုရှားအစိုးရက လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကုန်စည် ၂၃ တန် တင်ဆောင်ထားတဲ့ ကုန်တင်လေယာဉ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ ဆီ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်က စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရှိဟု WHO ပြော (AFP/STR)
ဖဖေျောဝါရီ ၉, ၂၀၂၀ - ၉:၅၄ ညနေ
တရုတ်အစိုးရရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအဆင့်တွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားတာကို တားဆီးတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း WHO ညွှန်ချုပ် ဂပ်ဘရေအီးဆစ်က ပြောပါတယ်။
နိုဝငျဘာ ၂၇, ၂၀၁၉ - ၁၁:၃၄ ညနေ
လိမ္မော်သီးဟာ လူကြိုက်များသော အသီးအနှံတွေထဲက တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဈေးလည်းသိပ်မကြီးသလို ဝယ်ရလည်းလွယ်ပါတယ်။ရာသီမရွေးလည်း ဝယ်လို့ရပါတယ်။ လိမ္မော်သီးဟာ အခွံခွာရလွယ်ပြီး စားရလွယ်ပါတယ်။
သွေးပေါင်ချိန်ကို လျော့ချပေးနိုင်မယ့် အစားအစာများ
နိုဝငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၉ - ၉:၄၆ ညနေ
သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်နေတာကို ပြန်လည်လျော့ချဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ ဆေးဝါးတွေသာမက အစားအစာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာတော့ စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ သွေးပေါင်ချိန်လျော့ချဖို့ ကြိုးစားတာကို DASH လို့ ခေါ်ပါတယ်။အရှည်ပြောရရင် Dietary Approaches to Stop Hypertension လို့ ခေါ်ပါတယ်။ခင်ဗျားကို ဘာတွေစားရမယ်လို့ ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်အစားအစာကို ဘယ်လောက်ပမာဏစားသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုပုံစံစားသင့်တယ်ဆိုတာကို ညွှန်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အငံလျှော့စား ၊ အသီးအရွက်များများစား ၊ နို့ ၊အသားငါးနဲ့ ပဲ စတာတွေ မျှမျှတတစား ဘာညာပေါ့။ ကဲ …. စလိုက်ကြရအောင်။
နိုဝငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၉ - ၉:၃၇ ညနေ
ပျားဆိုတာဟာ ပျံသန်းနိုင်သော အင်းဆက်အမျိုးအနွယ် သတ္တဝါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပျားသတ္တဝါဟာ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကို များစွာအကျိုးပြုတဲ့သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင် D အကြောင်းသိကောင်းစရာ
နိုဝငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၉ - ၉:၃၃ ညနေ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုတလော ဗီတာမင် D ချို့တဲ့တာတွေ တော်တော်များများ တွေ့လာရပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရင်း ကတော့ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှု့နည်းတာကြောင့်လဲ ပါပါတယ်။
ဇှနျ ၁၈, ၂၀၁၉ - ၉:၄၅ နံနကျ
သားအိမ်ကင်ဆာကို …ကုသပေးနိုင်တဲ့ ….သဘာဝဆေး (ရှားစောင်းလက်ပက်) အကြောင်း ကို ABNA ချစ်ပရိတ်သတ်အတွက် တင်ပြ အပ်ပါတယ်။
ဇှနျ ၁၈, ၂၀၁၉ - ၉:၃၈ နံနကျ
ငုံးဥနဲ့တွဲဖက်ပြီး လုံးဝမစားသင့်သော အရာများ ကို ABNA ချစ်ပရိတ်သတ်အတွက် တင်ပြ အပ်ပါတယ်။
ဇှနျ ၁၅, ၂၀၁၉ - ၁၁:၁၃ ညနေ
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥတွေမှာ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အာဟာရဓာတ်များစွာ ပါဝင်သလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း တော်တော်လေး အကျိုးပြုတဲ့ အစားအစာအဖြစ် လူတိုင်းက လက်ခံထားကြပါတယ်။ ကိုလက်စထရောနဲ့ ကယ်လိုရီဓာတ် အနည်းငယ်ပါဝင်တဲ့အတွက် တန်ဆေး လွန်ဘေး အတော်အသင့်စားမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဩဂုတျ ၆, ၂၀၁၇ - ၁၁:၀၁ ညနေ
အချိန်မှားပြီး စားလေ့စားထ ရှိကြတဲ့ အစားအစာတွေ
မေ ၂၉, ၂၀၁၆ - ၁၀:၂၀ ညနေ
အချိန်မှားပြီး စားလေ့စားထ ရှိကြတဲ့ အစားအစာတွေ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီး၏ အံ့ဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ
ဧပွီ ၈, ၂၀၁၆ - ၁၀:၅၂ ညနေ
ကြက်ဟင်းခါးသီးဟာ ခါးသက်သော အရသာရှိသည့် အတွက် ကြိုက်နှစ် သက်သောသူ နည်းပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကြက်ဟင်းခါးသီးဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပြီး စားသင့်သော အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ၎င်းအသီးမှ ရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်
မတျ ၆, ၂၀၁၆ - ၁၀:၁၃ ညနေ
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူတွေကို ဖြတ်လို့မရအောင် စွဲလမ်းစေတာက နီကိုတင်း ဓာတ်ပါ။ ဆေးလိပ် စီးကရက် သောက်ရာကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဲဒီ နီကိုတင်းဓာတ်က ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက ယနေ့တိုင် လူတွေကို မူးယစ်စွဲလမ်းစေတဲ့ အပြင် အာရုံကြောနဲ့ ကြွက်သားတို့ရဲ့ ဆဲလ်တွေ ပုံမှန် လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆေးရွက်ကြီး မီးလောင်ရာကနေ ဖြစ်လာတဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်ကြောင့် နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။